hababka horumarinta softiweerka
Ugu Weyn Ee Qa Qaababka Horumarinta Software-ka
Qaababka Horumarinta Software-ka
Qoraalkan waxaan ku mari doonnaa hababka horumarinta softiweerka ee kala duwan oo ay weheliyaan faa'iidooyinkooda iyo khasaaradooda iyo goorta la adeegsanayo nooc kasta.
Qaabka Istiraatiijiga ah
Habka wareega nolosha ee isku-shaandhaynta ahi iskuma daydo inuu ku bilaabo sharraxaad buuxda ee shuruudaha. Taabadalkeed, horumarku wuxuu kubilaabmaa cayimida iyo hirgalinta kaliya qeyb kamid ah softiweerka, kaas oo dib loo eegi karo si loo aqoonsado baahiyaha dheeraadka ah. Nidaamkan ayaa markaa dib loo soo celiyaa, oo soo saara nooc cusub oo software ah wareeg kasta oo qaabka ah.
Tixgeli tusaalaha meertada nolosha oo is bedbeddela oo ka kooban soo noqnoqodka afarta weji ee soo socda:
Marxaladda Shuruudaha, kaas oo lagu soo ururiyo laguna falanqeynayo shuruudaha barnaamijka. Kala-baxu waa inuu ugu dambayntii keenaa wajiga shuruudaha oo soo saara qeexitaan dhammaystiran oo dhammaystiran oo shuruudaha ah.
Marxaladda Naqshadeynta, kaas oo xal software ah si loo buuxiyo shuruudaha loogu talagalay. Tani waxay noqon kartaa naqshad cusub, ama kordhinta naqshad hore.
Wajiga Hirgelinta iyo Tijaabada, marka softiweerka la sumadeeyo, la isku daro lana tijaabiyo.
Marxalad dib u eegis ah, kaas oo lagu qiimeeyo softiweerka, shuruudaha hadda jira dib loo eego, iyo isbadalada iyo ku darida shuruudaha la soo jeediyay.
Wareeg kasta oo ka mid ah tusaalaha, go'aan waa in la sameeyaa haddii software-ka ay soo saartay wareegga la tuurayo, ama loo hayn doono bar bilowga wareegga xiga (oo mararka qaarkood loo yaqaan nooc kordhin dheeraad ah).
Aakhirka dhibic ayaa laga gaadhayaa halka ay shuruudihu ka buuxaan oo softiweerka loo geyn karo, ama ay noqoto wax aan macquul ahayn in kor loo qaado softiweerka sidii loogu baahnaa, bilow cusubna waa in la sameeyaa.
Qaabka wareegga nolosha ee socodsiinta waxaa loo ekeysiin karaa soo saarista softiweer qiyaas ahaan isku xigxiga. Ku sawirida isbarbardhiga hababka xisaabeed ee adeegsanaya qiyaas isku xigxig ah si loo gaaro xalka kama dambaysta ah, faa'iidada hababka noocan ah waxay kuxirantahay sida ugu dhakhsaha badan ee ay isugu yimaadaan xalka.
Fure u ah adeegsiga guuleysiga wareegga nolosha ee horumarinta barnaamijka softiweerku waa xaqiijinta adag ee shuruudaha, iyo xaqiijinta (oo ay ku jiraan tijaabinta) nooc kasta oo ka mid ah barnaamijyada ka soo horjeedda shuruudaha ku jira wareeg kasta oo ka mid ah moodeelka.
Faa'iidooyinka Model Model
Waxay soo saartaa softiweer shaqeynaya si dhakhso leh iyo hore inta lagu jiro wareegga nolosha barnaamijka.
Ka dabacsan badan - qiimo jaban si loo beddelo baaxadda iyo shuruudaha.
Si fudud loo tijaabiyo loona khafiifiyo inta lagu gudajiro yareynta.
Si fudud loo maareeyo khatarta maxaa yeelay qaybaha khatarta ah ayaa la aqoonsadaa oo la maareeyaa inta lagu gudajiro.
Soocelin kastaa waa dhacdo si fudud loo maareeyay.
Faa’iido darrooyinka Qaabka Istiraatiijiga ah
Weji kasta oo soo noqnoqosho ah waa mid adag oo aan is dulsaarin.
Dhibaatooyinka ayaa laga yaabaa inay soo baxaan oo ku saabsan qaabeynta nidaamka maxaa yeelay dhammaan shuruudaha looma ururin xagga hore ee wareegga nolosha oo dhan.
Qaab Kordhin ah
Qaab dhismeedka kororka ayaa ah qaab lagu horumariyo softiweerka halkaasoo nashqadda loogu talagalay, lagu fuliyo laguna tijaabiyo si isdaba-joog ah (in yar oo dheeri ah ayaa lagu daraa mar kasta) illaa iyo inta waxsoosaarku dhammaanayo. Waxay ku lug leedahay horumarinta iyo dayactirka labadaba. Badeecada waxaa lagu qeexaa sida ay udhamaatay markay qanciso dhamaan shuruudihiisa. Moodelkani wuxuu isku daraa walxaha moodeelka biyo-dhaca ah iyo falsafada is-dhaafsiga ah ee ku-meelgaarka ah.
Shayga waxaa loo googooyey dhowr qaybood, mid kasta oo ka mid ah oo loo qaabeeyey loona dhisay si gooni ah (waxaa loo yaqaan dhisme). Qayb kasta waxaa loo keenayaa macmiilka markay dhammaystirmaan. Tani waxay u oggolaaneysaa isticmaalka qayb ka mid ah wax soo saarka waxayna ka hortageysaa waqti horumarineed oo dheer. Waxay sidoo kale abuureysaa raasumaal ballaaran oo bilow ah iyadoo sugitaanka dheer ee soo socda laga fogaado. Moodelkan horumarka ayaa sidoo kale gacan ka geysanaya yareynta saameynta naxdinta leh ee soo bandhigida nidaam gebi ahaanba cusub hal mar.
Waxaa jira xoogaa dhibaatooyin ah qaabkan. Mid ayaa ah dhisme kasta oo cusub waa in lagu daraa dhismooyinkii hore iyo nidaam kasta oo jira. Hawsha ku-darsamida badeecadda dhismayaasha mid aan fududaynin sidoo kale. Haddii ay jiraan dhismayaal aad u tiro yar oo dhisme kastaa xumaado tani waxay isu beddelaysa qaab dhismeed iyo hagaajin. Si kastaba ha noqotee haddii ay jiraan dhismayaal aad u tiro badan markaa waxaa jira wax yar oo faa iido ah oo laga helo dhisme kasta.
Faa'iidooyinka Qaabka Kordhinta
Faa'iido-darrooyinka Qaabka Kordhinta
Goorma la istcimaalo Model kordhinta
Moodooyinka noocan oo kale ah waxaa loo isticmaalaa halka ay shuruudaha ka cad yihiin oo lagu fulin karo waji caqli leh. Jaantuska waxaa ka muuqda in shuruudaha ® loo qaybiyay R1, R2 R .Rn oo loo bixiyay si waafaqsan.
Badanaa tusaalaha noocan ah waxaa loo adeegsadaa codsiyada websaydhka iyo shirkadaha ku salaysan sheyga.
Qaabka agile waa isku-darka labada nooc ee wax-qabadka iyo kororka iyadoo la jebinayo shey qaybo ka mid ah halka wareeg kasta ama soo noqnoqosho, moodel shaqeynaya qayb ka mid ah la keenayo.
Moodelku wuxuu soo saaraa sii-deynno socda (is-dhexgal ah), markasta oo lagu daro is-beddello yar yar sii-deyntii hore (iterative). Inta lagu jiro soo noqnoqoshada kasta, sida alaabta loo dhisayo, waxaa sidoo kale la tijaabiyaa si loo hubiyo in dhamaadka soo noqnoqoshada badeecada la rarri karo.
Qaabka Agile wuxuu xooga saarayaa wada shaqeynta, maadaama macaamiisha, horumariyeyaasha iyo tijaabiyayaashu ay si wada jir ah u wada shaqeeyaan inta lagu jiro mashruuca.
Faa'iidada qaabka Agile waa inay si dhakhso leh u keento wax soo saar shaqeynaya waxaana loo tixgeliyaa hab horumarineed oo macquul ah.
Faa’iido darrooyinka ka muuqda qaabkani waxa weeye inay ku xidhan tahay macaamilka macaamiisha, mashruucu wuxuu u jiheysan karaa si khaldan haddii aanu macaamilku ka caddayn shuruudaha ama jihada uu doonayo inuu u socdo.
The V Model waa nooc la xoojiyay oo ah nooca biyo-dhaca ee caadiga ah kaas oo heer kasta oo ka mid ah horumarka nolosha la hubiyo ka hor inta uusan u gudbin heerka ku xiga. Qaabkan, tijaabinta softiweerku si cad ayey ugu bilaabataa bilowga hore, yacni isla marka shuruudaha la qoro.
Halkan, tijaabinta waxaan ula jeednaa xaqiijin iyadoo la adeegsanayo dib u eegis iyo kormeer, tusaale ahaan baaritaanka joogtada ah. Tani waxay gacan ka geysaneysaa sidii loo ogaan lahaa khaladaadka horraantii meertada nolosha waxayna yareysaa cilladaha mustaqbalka ee ka soo muuqan kara koodhka dambe ee wareegga nolosha.
Heer kasta oo ka mid ah wareegga nolosha ee horumarka ayaa leh qorshe imtixaan u dhigma. yacni sida marxalad kasta looga shaqeynayo, qorshe tijaabo ah ayaa loo sameeyay si loogu diyaariyo baaritaanka alaabooyinka wajigaas. Anagoo horumarinayna qorshayaasha imtixaanka, waxaan sidoo kale qeexi karnaa natiijooyinka laga filayo baaritaanka alaabooyinka heerkaas iyo waliba qeexida shuruudaha gelitaanka iyo bixitaanka heer kasta.
Sida Waterfall oo kale, marxalad kastaa waxay bilaabmaysaa uun marka tii ka horreysay ay dhammaato. Qaabkani waa mid waxtar leh marka aysan jirin shuruudo aan la aqoon, maadaama ay weli adag tahay in dib loogu noqdo oo isbeddel la sameeyo.
V Model - Faa'iidooyinka
Marxalad kastaa waxay leedahay wax soo saar gaar ah.
Fursad sare oo ah in laga guuleysto moodeelka biyo-dhaca sababtuna tahay horumarinta qorshayaasha tijaabada goor hore inta lagu jiro wareegga nolosha.
Waqtiga laga walwalayo marka la barbardhigo tusaalaha biyo dhaca ayaa hooseeya ama xitaa waxaan dhihi karnaa 50% wuu ka yar yahay.
Waxay si fiican ugu shaqaysaa mashaariicda yar yar ee shuruudaha si fudud loo fahmi karo.
Faa'iidada kheyraadka ayaa sarreeya.
V Model - Faa'iido daro
Adag oo adag, sida moodada biyo-dhaca.
Dabacsanaanta yar iyo hagaajinta baaxadda way adag tahay oo waa qaali.
Barnaamijka waxaa la soo saaray inta lagu gudajiro wajiga hirgelinta, sidaa darteed wax soosaarayaal ah oo hore oo software ah lama soo saaro.
V Model ma bixiso waddo cad oo loogu talagalay dhibaatooyinka laga helo inta lagu jiro wejiyada imtixaanka.
Goorma la adeegsanayo qaabka V
Sida aqoontayda ah waxaan shakhsiyan u maleynayaa / dareemayaa meesha waqtiga iyo qiimaha ay yihiin caqabadaha mashruuca markaa waxaan u adeegsan karnaa moodooyinka noocan oo kale ah gaarsiinta dhaqsaha iyo qiimaha leh.
Marka la barbardhigo qaabka biyo-dhaca, V Model waa wax ka badan ama ka yar isku mid laakiin waxqabadka tijaabadu wuxuu bilaabmaa goor hore, taas oo keeneysa waqti yar, iyo kharashka mashruuca.
Habka biyo-dhaca ayaa ah kan ugu da'da weyn uguna toosan hababka SDLC ee qaabeysan. Waxaa jira wajiyo adag oo weji kasta loo baahan yahay in la dhameystiro marka hore ka hor inta aan la aadin wajiga xiga. Dib u noqosho ma leh
Marxalad kastaa waxay ku tiirsan tahay macluumaadka marxaladda hore waxayna leedahay qorshe mashruuc u gaar ah.
Waterfall waa fududahay in la fahmo oo fudud in la maareeyo. Si kastaba ha noqotee, waxay badanaa u nugul tahay dib-u-dhac maadaama qayb kasta ay u baahan tahay dib-u-eegis iyo in si buuxda loo saxiixo ka hor inta aan wajiga xiga la bilaabin.
Sidoo kale, maaddaama ay jirto qol yar oo dib-u-habeyn lagu sameeyo marka marxaladda la dhammeeyo, dhibaatooyinka lama xallin karo illaa aad ka gaarto heerka dayactirka.
Moodelkani wuxuu si fiican u shaqeeyaa marka dhammaan shuruudaha la yaqaan oo dabacsanaanta looma baahna oo mashruucu wuxuu leeyahay waqti go'an.
Faa'iidooyinka qaabka biyo-dhaca
Marxalad kastaa waxay leedahay wax soo saar gaar ah iyo habka dib u eegista.
Wejiyada waa la shaqeeyaa oo la dhammeeyaa midba mar.
Si fiican ayuu ugu shaqeeyaa mashaariicda yar yar ee shuruudaha sifiican loo fahmay.
Waxay xoojineysaa fikradaha ah 'qeex ka hor naqshadeynta' iyo 'naqshadeynta ka hor lambarka'.
Faa'iido-darrooyinka u dhaca biyo-dhaca
Isku hagaajinta baaxadda inta lagu jiro wareegga nolosha waxay dili kartaa mashruuc
Ma jiro softiweer shaqeynaya oo la soo saarayo illaa goor dambe inta lagu jiro wareegga nolosha.
Qadar sare oo khatar ah iyo hubin la'aan.
Moodel liita oo loogu talagalay mashaariicda isku dhafan iyo ujeeddada u janjeedha.
Moodel liita oo loogu talagalay mashaariicda dheer iyo kuwa socda.
Qaab liita oo shuruudaha looga baahan yahay ay ku sugan yihiin qatar dhexdhexaad ah ama sare oo ah isbadal.
Goorma la istcimaalo qaabka biyo-dhaca
Nooca noocan oo kale ah ayaa si aad ah loo adeegsadaa halka shuruudaha ay ku cad yihiin mana jiri doonaan wax isbeddel ah waqtiga horumarinta. Waxaan ka heli karnaa xaaladaha noocaas ah mashaariicda difaaca, halkaasoo shuruudaha ay kala cadaan doonaan tan iyo intaanay qorin shuruudaha ay si fiican u lafaguri doonaan.
Waxaan sidoo kale magacaabi karnaa noocan moodeelka nolosha ee loogu talagalay mashaariicda socdaalka, halkaasoo shuruudaha ay isku mid noqon doonaan oo keliya madal ama luuqaduhu ay ku kala duwanaan karaan / isbeddeli karaan.
Sidoo kale waxay u adeegsan karaan mashaariic ay kafaala qaadayaashu naftooda ku sameyn doonaan waxqabadyo tijaabo ah, illaa iyo inta laga dhammaystirayo koodhkan ma geyno mashruuca.
at & t 5g band
taleefannada leh baytari laga saari karo 2015
T-Mobile wuxuu bilaabaa heshiisyo ganacsi oo cusub oo loogu talagalay iPhone 11 iyo iPhone 11 Pro / Max
128 vs 512GB: waa kuwee Galaxy Note 20 Ultra Ultra xulashada kaydinta waa inaad heshaa?
AT&T waxay bixisaa heshiisyada BOGO ee Apple Watch iyo Samsung Galaxy Watch Active 2
Apple waxay dacwad ka gudbisay diidmada dayactirka iPhone-ka ay biyuhu waxyeeleeyeen
Hubi kumbuyuutarkan shaqeynaya oo ku habboon Bluetooth ee loogu talagalay iPhone 6 Plus
T-Mobile ayaa la filayaa inay soo bandhigto soo bandhigga Galaxy Note 8 BOGO Jimcaha
Samsung Galaxy Z Fold 3 iyo Z Flip 3 ayaa lagu soo waramayaa inay wadaagi doonaan isla taariikhda la sii daynayo ee S21 FE
AT & T & apos; s Samsung Galaxy S20 FE 5G ayaa xitaa ka fiican T-Mobile & apos; s
67 jir ayaa qabtay Lapras isagoo ciyaaraya Pokemon GO, isla markiiba wuxuu u dhintay wadno qabad